Undergraduate Chitupa Zvirongwa »Hodges University - Admissions
Categories: Zvitupa zveChechi
Tanga Pane Yako Undergraduate Chitifiketi kuHodges University
Undergraduate Zvitupa neHodges University zvakagadzirirwa kukupa iwe neindasitiri-yakatarwa makosi anodiwa kuti uvake hunyanzvi hwako uchipfuura zvikwereti zvepamoyo zvakakosha kune anoshamwaridzana kana bachelor's degree. Pamusoro pezvo, zvitupa zvedu zvinounzwa 100% pamhepo uye zvinokutendera kuti ufambe nepurogiramu nekukurumidza uchipa hwaro hunodiwa kuti ubudirire mune rako basa raunosarudza. Isu tinopa zvitupa zvegraduate mu:
Business (Kuchengeta mabhuku, Risk Management, Kugadzirira Mutero)
Gadzira Technology (Mifananidzo, AutoCAD, Dhizaini Dhizaini, uye Chiitiko cheMushandisi / Webhu Dhizaini)
Bhizinesi Technology (eBusiness Software, eDiscovery / eLitigation, eBusiness Ventures)
Computer Ruzivo Technology (Rubatsiro Desk Rutsigiro, Ruzivo Rwehunyanzvi Rutsigiro, Computer Networking)
Izvi zvitupa zvakare zvine chikwereti, saka kana iwe ukafunga kuti iwe unoda kupedza degree rako, iwe unozogona kuisa zvikwereti kune shamwari yako kana bachelor's degree mune ramangwana zuva.
Bata Admissions Advisor kutaura nezve sarudzo dzemari. Zvimwe zvitupa zviri Core + 4 inokwanisa (uko kwaunogona kunyoresa izere nguva, kutora 16 maawa echikwereti pamutengo we12), Musoro IV unokodzera, kana yakakodzera kudzidza.
Shandisa nhasi, uye regai isu tikubatsire iwe kuwana hunyanzvi hwaunoda kuti ubudirire!
Koreji Affordability Nhungamiro: 2020 Yepamusoro Pamhepo Makoji muFlorida
Nongedzo kuzvikoro zvepamhepo. 2020 Yakanakisa Pamhepo Makoji muFlorida
Yakagamuchirwa Pamhepo Makoji: 25 Yakagamuchirwa Pamhepo Makoji eGrafic Dhizaini
Zvitupa zvebhizinesi - Nyowani
Kugamuchirwa kuHodges University Bhizinesi Zvitupa. Ethu maBhizinesi Zvitupa akakodzera kana iwe uchida iyo indasitiri-yakatarwa makirasi anodikanwa kuvaka hunyanzvi hwako uchipfuura iwo epakati makiredhi anodikanwa kune anoshamwaridzana kana bachelor's degree.
Ethu Bhizinesi Zvitifiketi zvinopihwa 100% pamhepo, zvinogona kupedzwa nekukurumidza, uye kukugadzirira iwe nehunyanzvi uye neruzivo iwe rwaunoda kuti ugare kumabhizimusi ane chekuita nesitifiketi bvunzo. Kuchengeta zvitupa zvedu zvichikwanisika, isu tiri kupa yedu CORE + 4 chirongwa uko iwe kwaunogona kunyoresa yakazara nguva, uchitora 16 maawa echikwereti pamutengo we12 Uyezve, iwe unogona kuve unokodzera Mutengo IV mari.
Ngatibatsire iwe kuti utange nhasi!
Chitupa cheBhuku rekuchengetedza ndechevaya vanotsvaga chinzvimbo chekupinda-semubati webhuki kana vanoshuvira kushanda munzvimbo inozvishandira vachishandira mabhizimusi akasiyana siyana epakati nepakati. Iwo kosi kuteedzana inosanganawo nezvinodiwa zvedzidzo zveiyo National Association yeVanozivikanwa Veruzhinji Bookkeepers (NACBP) uye inogadzirira vadzidzi ve Certified Ruzhinji Mubhuku wemabhuku (CPB) yekuongorora marezinesi, inozivikanwa munyika
Kosi yebasa redu rekuchengetedza mabhuku inosanganisira:
Nhanganyaya kuMari uye Management Accounting
Chitupa ichi chikamu chedu CORE + 4 chirongwa uko iwe kwaunogona kunyoresa yakazara, uchitora 16 maawa echikwereti pamutengo we12. Iwo ese makosi anodikanwa anopiwa 100% Pamhepo mune yeTEC fomati, ichikupa iwe mukana wekudzidza panguva yako. , pakufamba kwako.
Chitupa cheRisk Management Chitupa chine chikwereti chakagadzirirwa iwe kuti uwane ruzivo rwekutarisira njodzi neinishuwarenzi. Unyanzvi hwaunodzidza hunoshanda zvakanyanya kune zvinzvimbo muinishuwarenzi uye maindasitiri emabasa emari.
Iyo Risk Management Chitupa inosanganisira makirasi mu:
Zvemari Mari uye Inishuwarenzi
Yemunhu uye Bhizinesi Pfuma Inishuwarenzi
Pamusoro pezvo, zvikwereti zvakawanikwa mune ichi chitupa zvinonyatso kuchinjiswa kune Anoshamwaridzana kana Bachelor-chikamu bhizinesi degree degree muJohnson Chikoro cheBhizinesi. Kuwana ichi chitupa chakabatanidzwa nedhigirii kunogona kusangana neState yeFlorida zvinodikanwa zvedzidzo zveMugari Hutano neLife Agent License (ona inotevera URL)
Chitupa Kugadzirira Chitupa ndecheavo vanofarira nzvimbo dzekupinda-chikamu sevanogadzirira mutero kune vamwe kana madiki emabhizimusi emafaira emitero, kana avo vanotsvaga kuzvishandira kushandira makambani akasiyana madiki nepakati. Ichi chirongwa chinosangana nezvinodiwa zvedzidzo zveiyo Yemukati Revenue Service (IRS) uye inogadzirira vadzidzi ve Yakakosha Kunyoresa Bvunzo (ONA) inodikanwa kuti ive Inyoresa Mumiriri neiyo IRS. Anyoresa Mumiririri inyanzvi yemitero inogadzirira mutero unodzosera vanhu uye vanobhadhara vateresi uye vanogona kumiririra ava vanobhadhara pamberi pe IRS.
Coursework muTero Kugadzirira Chitupa inosanganisira:
Mutero Womunhu Mumwe Nomumwe
Federal Mutero Accounting Ini na II
Dhizaini Tekinoroji Zvitupa
UX / Webhu Dhizaini
Chitupa ichi chakagadzirirwa kugadzirira vadzidzi vekupinda-chikamu chinzvimbo seVagadziri Vagadziri vanoshanda pfupi pfupi inofamba maficha senge kushambadzira, webhu animated banner, mifananidzo yemifananidzo yeiyo webhusaiti template, kana mafupi maficha eanoratidzira. Isu tinoshandisa chero nhamba yeiyo 20 kuwedzera Adobe Creative Cloud mafomu ekugadzira chirongwa chekupedzisira.
Mienzaniso yemamwe mapurojekiti aungaite:
Shandisa Animate, XD, uye Dreamweaver kugadzira mawebhusaiti ehunyanzvi emabhizinesi emuno.
Shandisa Adobe Premiere neAftereffects kugadzira mafirimu mapfupi easina purofiti.
Shandisa Adobe Photoshop, Illustrator, uye Indesign kugadzira zvinyorwa zvekare kune chero huwandu hwemapurojekiti ako wega.
At chete 9 maawa echikwereti, unogona kukwanisa kupedzisa chitupa ichi pasi pegore!
Chitupa cheAutoCAD inoverenga vadzidzi vekupinda-chikamu chinzvimbo sevashandi veCAD. Wana ruzivo-rwaunoda shanda se2D kana 3D Drafter muindasitiri yeArchitectural, Engineering, Kuvaka, kana Hutano. Kiredhiti akawedzera mune ichi chitupa anogona kunyorera kune anoshamwaridzana kana degree reBachelor kuHodges University.
Dzidzo muAcotCAD Drafting Chitupa inosanganisira 2D uye 3D komputa graphic uye yehupenyu kugona senge:
Dhirowa mitsara yekushandisa
Dhirowa tenzi kuronga nharaunda
Dhirowa geographic ruzivo system mepu
Iwe zvakare unogona kugona zadzisa chitupa ichi mune isingasviki gore!
Graphic Dhizaini Kugadzira
Chitupa ichi chinokuverengera iwe chinzvimbo chekupinda-chikamu se Graphic Dhizaini Desktop Muparidzi achishandisa yakakosha mashandisiro e Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, uye Indesign) kuvaka uye kugadzirisa iyo yekumaka system. Pamusoro pezvo, dzidza maitiro ekushandisa iyo chaiyo misimboti yedhizaini kunyatso kutaurirana uye brand mameseji kubva kutanga dhizaini dhizaini kune epanyama kugadzirwa.
Chitupa ichi yakanakira avo vanoshuvira kuwana hwaro mudhijitari graphic dhizaini, pasina kutora iyo yepamoyo kosi inodiwa kune dhigirii. Misoro yakavharwa inosanganisira:
Dhizaini Dhizaini kubva kuSketch kuenda kuProfessional Production
Kuvandudza Kunzwisisa kweiyo Grid Nheyo
Maitiro Ekubatanidza iyo Grid Nheyo neVanoona Hierarchy
Kugadzira Mafomu Anobudirira Ekutaurirana kwechigadzirwa kana sevhisi
Chitupa ichi 24 maawa echikwereti uye anogona kupedzwa munenge gore. Kiredhiti akawanikwa anogona kuendeswa kune anoshamwaridzana kana degree reBachelor kuHodges U.
Chiitiko cheMushandisi (UX) uye Webhu Dhizaini
Chitupa ichi chinobatanidza hwaro hwekodhi uye nemisimboti yeakabudirira wayaframe inoteerera dhizaini, inosanganiswa pamwe nekunzwisisa kwemabatiro aungaita pfungwa yako kuhupenyu kubva pane yakashata sketch. Gamuchira kurairirwa mune zvidzidzo senge:
Dhijitari Mifananidzo uye Mhedzisiro yeWebhu
Dhizaini Webhu I, II, uye III
Dzidza inoteerera dhizaini dhizaini uchishandisa izvo zvazvino kunyorera muindasitiri muAdobe Creative Cloud, pasina kutora iyo yakakosha kosi yezvidzidzo inodiwa nedhigirii. Iwe uchazoda komputa uye Adobe CC kunyorera yeichi chaiyo chitupa chirongwa. Pa 21 maawa echikwereti, ichi chitupa chinogona kupedzwa munenge gore. Paunenge wabudirira kupedzisa, iyo UX uye Webhu Dhizaini Chitupa inochinjiswa kune inosonganirana kana bachelor's degree kuHodges U.
Bhizinesi Technology Zvitupa
E-Kuwana / Litigation
Chitupa ichi chinobatanidza software-yakavakirwa chirongwa dhizaini, kuitisa, uye nharembozha uye kunyorera kuvandudza nesoftware mainjiniya, uye ruzivo rwekutarisira chirongwa kukugadzirira iwe nenheyo inodiwa pabasa mukugadzira software uye kusimudzira.
Chitupa ichi yakanakira avo vanoda iyo ruzivo vasingatore iyo yepamoyo kosi inodiwa kune software yekuvandudza degree. Makosi akafukidzwa anosanganisira:
Java Zvirongwa uye Zvirongwa Zvekugadzira
Web App Applications
Yedu e-Bhizinesi Ventures Chitupa inogona gadzirira vadzidzi kuronga, kubata, kutarisira, uye kushambadzira hunowanikwa bhizinesi repamhepo kushandisa hunyanzvi hunodzidziswa mumakosi senge:
Diki Bhizinesi Management uye Entrepreneurship
Zvemagariro Media uye Kubatana
Ichi chirongwa chakanakira avo vanotarisa kwairi kuzadzisa izvo hunhu hunodiwa kune digital kushambadzira basa pasina kutora kosi yezvakakosha inodikanwa nedhigirii. Pamaawa makumi maviri nechimwe emaawa echikwereti, ichi chitupa chinogona kupedzwa munenge gore uye, pachinopedziswa, chinoshandisirwa kune anoshamwaridzana kana degree reBachelor kuHodges U.
Ichi ndicho chitupa chakanakira avo vanoda nzwisisa zviri pamutemo zvinobatanidzwa mukuita bhizinesi mune inogara ichichinja nyika yemagetsi. Makosi anovhara nyaya dzenyaya dzakadai se:
Data Yakavanzika uye kushandiswa kweSocial Media
eFiling uye eLitigation
Pamaawa gumi nemashanu chete echikwereti, chitupa ichi chinogona kutorwa munenge gore uye chinogona kuchinjira kuBachelor in Legal Study (kana imwe bachelor's degree) kuHodges U.
Computer Ruzivo Technology Zvitupa
Batsira Desk Rutsigiro
Chitupa cheRubatsiro Tsigiro chakakwana kune avo vari kutsvaga chinzvimbo chekupinda-chikamu muIT. Chitupa chinobatanidza iyo kuvandudzwa kwehardware, masisitimu anoshanda, uye netiweki, nerutsigiro rwevashandisi uye hunyanzvi hwekuita dhizaini kutanga kushanda muRuzivo Technology munda. Panguva imwe chete tora yako indasitiri zvitupa muA + uye Net + uine chitupa chako. Makosi akafukidzwa anosanganisira:
A + Hardware Ini na II
A + Lab / Certification Gadzirira
CompTIA Network + Certification Kugadzirira
Mushandisi Rutsigiro uye Rubatsiro Desk Kushanda
Pamaawa gumi nemasere chete echikwereti, chitupa ichi chinogona kutorwa pasingasviki gore uye chinogona kuchinjira kune mumwe wevadzidzi kana degree reBachelor kuHodges U.
Ruzivo rweTekinoroji Rutsigiro
Chitupa ichi chinokuverengera nehunyanzvi hunodikanwa hwekupinda-chikamu chinzvimbo seye IT inotsigira nyanzvi. Nyaya dzekudzidza senge:
Basic Hofisi Zvikumbiro
Networks uye Telecommunications
Ichi chirongwa chakanakira avo vanotarisa kwairi kuzadzisa hunyanzvi hwezvigadzirwa zveindasitiri muA + neNet + panguva imwe chete nechako chitupa, pasina kutora kosi yezvidzidzo inodiwa padanho. Pamaawa makumi maviri nemana emaawa echikwereti, ichi chitupa chinogona kupedzwa munenge gore uye kana chabudirira kupedziswa chinoendeswa kune mumwe wevadzidzi kana degree reBachelor kuHodges U.
Chitupa ichi chinovakira pahunyanzvi hwekubatanidza network kuti ikugadzirire iwe pazvinzvimbo zvinoda hunyanzvi hwekutengesa mitambo yekutarisira nekuchengetedza nharaunda dzakawanda dzenetwork.
Chitupa cheNetworking Specialist chakanakisa kune avo vanoshuvira kuwana zvitupa zveindasitiri muA +, Net +, CCENT, CCNA, Linux +, uye matatu maSeva eWindows panguva imwe chete nechitupa, pasina kutora iyo yakakosha kosi inodiwa kune dhigirii.. Makosi akafukidzwa anosanganisira:
A + Hardware Ini na II neLab Certification Kugadzirira
Kuwedzera uye Kubatanidza Networks
Networking neWindows Server
Kugadzirisa & Kuchinja Zvakakosha
Linux Sisitimu & Yekuchengetedza Kutungamira